Sababta ciidamada Maamulladu u diidan yihiin dagaalka Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Sababta ciidamada Maamulladu u diidan yihiin dagaalka Al-Shabaab
Ciidamada maamul goboleedyada ayaa labadii sano ee la soo dhaafay ka caga jiidayay ka qeyb galka howgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, kadib caro ka dhalatay xaqiraad ay ciidamadaas ku sameysay warbaahinta ku hadasha afka Dowladda Fadaraalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay ogaatay Keydmedia Online, ciidamada Maamullada Galmudug, Hirshabeelle, Koofur galbeed iyo Jubbaland, ayaa labadii sano ee la soo dhaafay ka caga jiidayay in ay ka qeyb qaataan dagaallada ka dhanka ah Al-Shabaab kadib xaqiraad ay kala kulmeen warbaahinta qaranka.
Sida aan ka soo xiganay saraakiil sar-sare ciidamada dowlad goboleedyada, ayaa cabasho xooggan u gudbiyay madaxdooda, kadib markii aysan wax dallacaad ah helin tan iyo markii Farmaajo loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya, afar go’ ka hor.
Ilaha aan xogtaan ka soo xiganay, waxa ay inoo xaqiijiyeen in xaalku fara ka sii baxay markii warbaahinta qaranku caadeysatay in ay xaqirto guulaha ay sida gaarka ah u soo hooyaan ciidamada maamulladu, isla markaana ay guulahaan u nisbeeyaan Ciidanka Xoogga dalka (SNA).
“Ciidamada dowlad goboleedyada, iyaga oo markii hore la dayacay oo aan dallacsiin iyo darajo siyaadin heysan, ayay warbaahita qaranka, si joogto ah ugala kacday xaqiraad is daba jog ah, dagaallo aysan Ciidanka XDS ka qeyb qaadan ayayna guulaha u nisbeysay”. Ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee Koofur galbeed.
Hore, isla qodobkaas, waxaa ka dhawaajiyay Madaxweynaha maamulka Jubbaland, Axmed Madoobe, halka uu hore cabasho uga muujiyay madaxweynihii hore ee maamulka Koofur galbeed, Shariif Sakiin.